▷ Laptop kacha mma 17-inch nke 2022. Kedu nke ịzụrụ?
Laptọọpụ ọ nwere ike dochie nke desktọpụ? Laptọọpụ nwere ike ịbụ naanị kọmputa gị? Azịza nke ajụjụ a, nke a jụrụ afọ ole na ole gara aga, bụ: Ee, kpam kpam. N'ezie, ajụjụ kwesịrị ịbụ: Laptọọpụ nwere ike ịka nke desktọọpụ?
N'echiche a, ọ gwụla ma PC gị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kọmputa ọhụrụ, ọ bụghị karịa PC maka egwuregwu ma ọ bụ ọrụ, azịza ya ka bụ ee. Ọ ga-eju gị anya ihe ị ga-enweta n'otu n'ime ngwa ọrụ siri ike nke anyị ga-ewetara gị n'okpuru, site na otu n'ime laptọọpụ inch 17 akwadoro.
2 Laptọọpụ inch 17 kacha mma
2.1 ASUS ROG: Laptọọpụ inch 17 nwere uru kacha mma maka ego
2.2 MSI GL75. Laptọọpụ egwuregwu inch 17 kacha mma
2.5 LG Gram: Laptọọpụ inch 17 nwere ihuenyo kacha mma
3 Ụdị laptọọpụ inch 17 kacha elu
4 Nleta nke laptọọpụ inch 17
5 Ị chọrọ laptọọpụ inch 17? Uru na ọghọm
6 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ inch iri na atọ dị ọnụ ala
Iji nyere m aka ịhọrọ, n'okpuru anyị ejikọtala ọnụ Ntụnyere laptọọpụ 17-inch kedu ihe ị nwere ike ịzụta na ire ere
Laptọọpụ inch 17 kacha mma
N'okpuru ebe a, dabere na nyocha na ahụmịhe anyị, anyị na-egosi gị ụfọdụ n'ime kọmpụta kacha mma 17-inch nkewa site na mmefu ego dị iche iche, njirimara na ojiji.
ASUS ROG: Laptọọpụ dị inch 17 nwere uru kacha mma maka ego
Ịhọrọ laptọọpụ bara uru maka ego nke nha a adịghị mfe n'ihi na emebere ọtụtụ maka ịgba chaa chaa ya mere nwere arụmọrụ na ọnụahịa dị elu. Ọ bụ ya mere, kama ikpe ikpe naanị ọnụahịa, maka ụdị a anyị eburula n'uche mmekọrịta ya na njirimara na uru nke ihe nlereanya ọ bụla na-enye.
N'echiche a, ASUS ROG GAMING, nke ọnụ ya na ihe dịka $ 1700, na-enye nnukwu nguzozi n'etiti ọnụahịa na njirimara.. Ọ nwere ngwa ngwa Core i7 quad-core processor na kaadị eserese GeForce RTX 2060 na-eme ka ọ nwee ike ịrụ ọrụ ọ bụla ị tinyere n'ihu ya. N'ịdị elu karịa 3,2 centimeters, ọ bụ akwụkwọ ndetu dị ntakịrị, ma ihe owuwu ya na-adịgide adịgide na-eme ka ọ dị arọ.
Laptọọpụ dị inch 17 enweghị ihuenyo mmetụ mana ọ bụghị ụdị maka kọmpụta nke nha a. Ikekwe ọ na-agba ọsọ dị ka ụdị ndị ọzọ nke nha ya na oke dị elu, ebe ọ na-arụ ọrụ site na diski 1TB SSD. N'ihe niile, ọ bụ laptọọpụ siri ike ma dịkwa ngwa ngwa maka ebumnuche izugbe.
MSI GL75. Laptọọpụ egwuregwu inch 17 kacha mma
MSI GL75 agụ owuru ...
Ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ laptọọpụ nha a na-eme ya n'ihi na ha chọrọ iji ya gwuo egwuregwu. Nke a pụtara na ha chọrọ kọmputa nwere oke arụmọrụ.
Ọ bụrụ na nha laptọọpụ gị abụghị nsogbu nye gị, MSI GL75 Leopard bụ anụ ọhịa mara mma nke laptọọpụ, ma maka nha ya na arụmọrụ ya..
Ọ na-eji kaadị eserese NVIDIA GeForce GTX 2070 kachasị ọhụrụ yana Core i7 quad-core processor, yana draịva siri ike nke ga-egbochi egwuregwu ọ bụla ị tụbara ha.
Ọ bụ ezie na ọ bụ inch 17 kacha mma iji gwuo egwu, ọnụ ahịa karịa € 1400, yabụ anyị na-akwado Nke a 15 inch ihuenyo egwuregwu laptọọpụ.
Akụkụ kachasị mma banyere ihe a niile bụ na ọ na-arụ ọrụ kachasị na-enweghị oke ọkụ. Ọ bụrụ na ihe niile anyị gwara gị anaghị ezuru gị ngwa ngwa, ị nwere ike kwalite site na ngwa ngwa ngwa ngwa ma ọ bụ quad SSD n'usoro RAID. Agbanyeghị, njirimara ndị a niile nwere ụfọdụ ndọghachi azụ. Ihe owuwu ahụ adịghị mma dị ka laptọọpụ ndị ọzọ na ahụigodo nwere ike ibu ibu. Na mgbakwunye, ọnụahịa ahụ dị ntakịrị karịa ihe ọtụtụ ndị ọrụ dị njikere ịkwụ ụgwọ, ihe dịka 1400 euro.
Aha nkwanye ugwu: ASUS ROG - Ọ bụrụ na MSI dị oke ọnụ, laptọọpụ ASUS nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ maka ndị chọrọ inwe ike igwu egwu ngwa ngwa yana ezigbo eserese. Ọ nwere kaadị GTX 2070 nke zuru oke maka nkọwa mkpebi kachasị yana ngosipụta nwere nnukwu nchapụta na agba. Agbanyeghị, n'akụkụ ala, ihe nlereanya a na-eji draịvụ ike ọdịnala, nke na-eme ka ọnụ ahịa ya na euro 1700.
Ụdị na-arịwanye elu na-amalite imepụta laptọọpụ inch 17 dị gịrịgịrị ma dị mfe iji nwaa ma mee ka ha nwee ike ibugharị dịka o kwere mee. MSI ejirila ihe nlereanya a rụọ ọmarịcha ọrụ site n'ịrụ usoro kemgwucha mkpa na ìhè na-enweghị ịchụ àjà arụmọrụ. Ọ bụ naanị 1,9 centimeters gbara ọkpụrụkpụ ma tụọ ihe na-erughị 2.25 n'arọ, mana ọ gụnyere ihe nrụpụta AMD Ryzen 5 yana kaadị eserese GeForce RTX 3060 ọhụrụ. iji wepụta arụmọrụ egwuregwu gbajiri agbaji.
Iji mee ka ọ dịkwuo ngwa ngwa, ihe nlereanya a nwere 1TB SSD nke na-eme ka akpụkpọ ụkwụ na oge ibu dịkwuo mma, naanị ihe dị njọ bụ na ọ nwere ike na-ekpo ọkụ mgbe ụfọdụ na ngosi nwere ike inye agba na nchapụta ka mma. Ọnụ ego ahụ, gburugburu euro 2000, dị ntakịrị ọnụ mana arụmọrụ ya siri ike.
Akwụkwọ ndetu HP 17-by2024nf ...
N'ịbụ ndị a na-ekwusi ike na ịrụ ọrụ na ihuenyo buru ibu nke chọrọ ike ka ukwuu, laptọọpụ 17-inch amaghị nke ọma maka batrị ha na-adịte aka.
N'echiche a, ọ dị ka HP achọpụtala na ụfọdụ ndị chọrọ ogologo oge nnwere onwe na ya mere ha ji chepụta i3 ndị na-arụ ọrụ obere voltaji nke nwere ike inye ihe karịrị awa 10 nke ọkpụkpọ vidiyo dijitalụ, nke dị pasentị iri ise karịa ọtụtụ akwụkwọ ndetu nke nha a.
N'ezie, arụmọrụ ya dị ntakịrị ala n'ihi ihe nrụpụta ike a dị ala, nke na-eme ka ọ bụrụ kọmpụta zuru oke karịa ihe ọ bụla. Ọnụ ya dị ihe dị ka euro 600 ma ọ bụ obere.
LG gram: Laptọọpụ inch 17 nwere ihuenyo kacha mma
Mgbe ị na-eche maka ngosipụta dị elu, LG ọ bụghị nke mbụ ika nke ahụ na-abata n'uche, karịsịa ma a bịa na laptọọpụ. Nke a bụ ya mere LG gram ji dị ịtụnanya. Ihe nlereanya a na-agụnye ihe ngosi panel nke inch 17 dabere na panel IPS na-enye ọkwa dị egwu nke nchapụta na agba yana akụkụ nlele mara mma, na-eme ka ọ bụrụ nnukwu nhọrọ maka ndị ọrụ na-achọ ihuenyo dị elu maka ọrụ eserese ma ọ bụ egwuregwu.
Ihe nlereanya a nwekwara nnukwu atụmatụ ndị ọzọ dị ka Core i7 quad-core processor na nnukwu 512GB SSD. N'ihe banyere nha, ọ bụ kọmpụta kọmpat nke ọma na-atụ 1,7 centimeters ọkpụrụkpụ na 1,3 kg n'ịdị arọ. Nnukwu ihe ndọghachi azụ ya bụ ndụ batrị dị mkpụmkpụ ya. Ọnụ ahịa ya dị ihe dịka 1400 euro.
Ụdị laptọọpụ inch 17 kacha elu
Enwere ọtụtụ ụdị na-enye ụdị 17 ”dị maka ndị na-achọ ngwaọrụ nwere ntakịrị obere ngagharị, mana yana mmụba n'ihe gbasara elu ọrụ yana nha maka vidiyo. Nke pụtara ìhè bụ:
Onye na-emepụta North America sokwa na ndị ukwu. Akara akụkọ ihe mere eme nke nwere akụrụngwa nwere ergonomics na imewe dị ịrịba ama, yana teknụzụ kachasị ọhụrụ, nnukwu ụdị dị iche iche n'ihe gbasara oke (dịka: Pavilion maka ojiji n'ozuzu ya, ma ọ bụ OMEN dị elu maka egwuregwu), yana ezigbo mma. .
Nnukwu kọmpụta ndị China apụtala dị ka otu n'ime ndị isi n'ịre ahịa laptọọpụ ekele maka ịdịmma ya na ọnụ ahịa ya. Otu ezinụlọ nke kọmpụta mkpanaka nke dabere na IBM ThinkPad, ebe ọ bụ na nke China ga-etinye uche na nkewa a. Ị nwere ọtụtụ usoro iji gboo mkpa niile, ọbụlagodi maka gburugburu azụmahịa. Ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ụdị 17-inch, dị ka ụfọdụ sitere na usoro IdeaPad ma ọ bụ Legion (egwuregwu).
Ndị Taiwanese bụ onye ndu na nne na nna n'ụwa niile, ọ chọkwara iweta ọmarịcha ahụ na laptọọpụ ya. Ndị otu gị pụtara maka ihe mara mma ruru ogo / ọnụego, yana inwe teknụzụ kachasị ọhụrụ na inwe ụdị akụrụngwa kacha mma. ASUS abanyekwala n'ọhịa nke ihuenyo, na nke bụ eziokwu bụ na ọ na-arụpụta nnukwu ihe na nke ahụ, ya mere kọmputa ya ga-enwe oghere ndị mara mma. N'aka nke ọzọ, imewe ha na ịdị ọkụ ha nwere ike ime ka ha bụrụ ezigbo nhọrọ maka Dell XPS ma ọ bụ Apple MacBook.
MSI Onye Okike Z17 ...
Ọ bụ akara nne nne nke mekwara ịrị elu na akwụkwọ ndetu, mana elekwasị anya na ya akụrụngwa egwuregwu. Ya mere, ọ dị mfe ịchọta akụrụngwa nwere ike dị ukwuu na nha ihuenyo n'etiti usoro dị iche iche. Na mgbakwunye, enyo ndị a na-esonyere nnukwu ngwaike arụmọrụ maka ihe na-achọsi ike.
Onye nrụpụta Taiwanese a jisiri ike dobe onwe ya dị ka otu n'ime ndị ama ama dabere na oke mma / ọnụahịa dị mma. Kedu ihe ọzọ, Ha bụ akụrụngwa siri ike emebere iji rụọ ọrụ ogologo oge. Ahụmahụ ndị otu ndị a hapụrụ na-adịkarị mma. N'ime usoro ya, ị nwekwara ike ịhụ ọtụtụ ụdị 17-inch, dị ka Aspire (maka iji ọnyà ọzọ) ma ọ bụ Nitro (egwuregwu).
Yana Samsung ọ bụ eze nwanyị nke nrụpụta na mmepe nke ogwe ngosi. Ndị otu ha na-eji ogwe aka nke aka ha eme ihe, nke na-ejikọta ya na àgwà. Nke a South Korea ika nwere ọtụtụ ụdị buru ibu dị ka nke usoro gram. Ndị otu a na-apụta ìhè karịsịa maka ọdịdị ihuenyo, mkpebi ahụ, yana àgwà, ọkụ, arụmọrụ, na ọnụahịa dị mma.
Nleta nke laptọọpụ inch 17
Laptọọpụ nwere a 17 ”ihuenyo Ọ nwere diagonal nke 43,8 cm. Otú ọ dị, ọ bụghị ihuenyo niile na-eji otu akụkụ, ma ọ bụ akụkụ akụkụ, ya mere laptọọpụ nwere ogwe ndị a nwere ike ịdị elu na obosara dị iche iche.
Otu n'ime ndị kasị nkịtị ruru na-emekarị 16: 9, 16:10 ma ọ bụ 3: 2, ma ọ bụrụ na anyị na-elekwasị anya na 16: 9, nke bụ ihe kasị nkịtị, o nwere akụkụ nke mkpokọta 37,6 cm n'obosara na 21.2 cm n'obosara. Agbanyeghị, na nke ahụ, anyị ga-agbakwunye akụkụ nke okpokolo agba (ọ bụrụ na ha abụghị ụdị ihuenyo enweghị ngwụcha ma ọ bụ enweghị okpokolo agba).
Ị chọrọ laptọọpụ inch 17? Uru na ọghọm
Mgbe ị hụrụ a 17 nke anụ ọhịa ahụ laptọọpụ Ihe abụọ nwere ike ime: ị hụrụ ya n'anya ma ọ bụ kpọọ ya asị. Ọ bụghị kọmputa maka onye ọ bụla.
Enwere otu ndị ọrụ abụọ dị iche iche na-akọcha kọmpụta nke nha a. Ndị mbụ bụ ndị na-achọ otu ahụmịhe ahụ ha nwere na kọmputa desktọpụ ha na laptọọpụ ha. Ọ bụ ezie na ọ nweghị laptọọpụ nwere ike ịkwalite ma ọ bụ gbasaa site na nnukwu ụlọ elu, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụdị 17-inch na-enye gị ohere ịgbasa RAM ma ọ bụ nchekwa ma ọ bụ na ha nwere ohere itinye ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri na ihe ndị ọzọ karịa obere akwụkwọ ndetu. Tụkwasị na nke a, na nke a bụ ihe kachasị mkpa maka iji ya eme ihe kwa ụbọchị, ihuenyo ya na igodo ya dị nnọọ ukwuu ma dịkwuo mma.
Laptọọpụ dị inch 17 bụ otu n'ime kọmpụta kachasị ike dị na ya ma nwee ike dochie PC gị nke ọma. Akwụkwọ ndetu ndị a nwere atụmatụ na ọrụ na-etinye ha na kọmpụta desktọpụ n'otu asọmpi. Site na uru arụmọrụ na-arị elu na sistemu ndị pere mpe, laptọọpụ nke nha a aghọwo ọkachamara na egwuregwu vidiyo.
Dị ka uru nke laptọọpụ 17-inch anyị doro anya na anyị nwere nha ihuenyo, ọbụnadị ụfọdụ ụdị enweela mkpebi 4K n'ihi ya, ọ bụ ezigbo obi ụtọ maka anya.
Uru ọzọ dị na kọmpụta ndị a bụ na, dịka iwu n'ozuzu, ha na-ebukarị ngwaike dị ike yabụ na ha bụ ezigbo nnọchi maka kọmpụta desktọpụ kpochapụwo. Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu egwu, dezie vidiyo ma ọ bụ na ịchọrọ ike n'ebe ọ bụla n'ụwa, ị ga-ahọrọ otu n'ime nha a.
Dị ka isi ihe ọjọọ anyị nwere nha na ibu. Laptọọpụ dị sentimita 17 na-abụkarị kọmpụta buru ibu, buru ibu ma dị arọ. Ọdịiche dị na 13-inch nwere ike ịbụ ọkara okpukpu abụọ nke ịdị arọ taa ya mere ọ bụ isi ihe ị ga-eburu n'uche.
Como ndụmọdụ maka ịzụrụ laptọọpụ, anyị ga-akwado naanị laptọọpụ 17-inch ma ọ bụrụ:
Ị nweghị ike ịnwe kọmputa desktọpụ n'ụlọ
Ị chọrọ ike dị ukwuu na ị na-eme njem mgbe mgbe
Ibu na nha adịghị gị mkpa
Ọ bụrụ na nkà ihe ọmụma gị dabara na nke ọ bụla n'ime isi ihe ndị a, mgbe ahụ ị ga-enwe obi ụtọ na ịzụrụ nnukwu laptọọpụ. N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ bụrụ na ị na-eche na ọ ga-adị arọ nke ukwuu iburu ya n'ebe ọ bụla, ikekwe ọ ka mma ka ị lelee ihe ndị a. Laptop 15 inch.
Ọ bụrụ na ị na-eche zụta laptọọpụ inch iri na asaa na ọnụ ahịa dị mma, ị nwere ọtụtụ nhọrọ ime ya, dị ka:
Ụlọikpe Bekee: Spanish nwere akụkụ nke obere akụrụngwa n'etiti nke ị ga-ahụ ndị na-eduga ụdị. Saịtị ntụkwasị obi ebe ị nwere ike ịzụta ma ọnlaịnụ ka ha nwee ike iziga ya n'ụlọ gị ma ọ bụ gaa n'ebe ịre ahịa kacha nso. Na mgbakwunye, mgbe ụfọdụ ha na-enwe nkwalite, dị ka Tecnoprices, ebe ọ bụ na ọnụ ahịa ha anaghị abụkarị ndị kasị ala ...
mediamarkt: ọ bụ ebe ị nwere ike ịhụ teknụzụ na ọnụ ahịa dị mma. N'ezie ị nwere laptọọpụ nke ụdị dị iche iche na ihuenyo 17-inch. N'okwu a, ị nwekwara ike họrọ ịga ụlọ ahịa Mediamarkt masịrị gị ma ọ bụ tụọ ya n'elu ikpo okwu weebụ ha.
Amazon: Ọ bụ ọkacha mmasị nke ọtụtụ, ebe ị ga-ahụ ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke ụdị, ụdị na onyinye nke 17-inch laptọọpụ. Na niile na-eduga ika na ọtụtụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ị na-enwe nkwa na nchekwa nke ikpo okwu America a na-enye mgbe niile. Ma ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa Prime ị nwere ike zụta na-enweghị ụgwọ mbupu na ngwugwu gị ga-abata ngwa ngwa ...
nrutu: ndị French nwekwara ọtụtụ ụlọ ọrụ na mpaghara Spanish ebe a na-azụta laptọọpụ 17, yana usoro ịzụrụ na webụsaịtị ya. Ọnụ ahịa ya nwere ezi uche, ọ nwekwara nkwalite ụfọdụ oge ụfọdụ, dịka ọ dị na El Corte Inglés.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Size » Laptop 17 inch
6 kwuru na "laptọọpụ inch 17"
Ọktoba 2017-06 na elekere 21:7 nke abalị
Daalụ nke ukwuu enwere m ọtụtụ obi abụọ n'etiti Lenovo Y70 na Acer Aspire V17:
Lenovo Y70 Ahụla m ihuenyo na ụlọ ahịa ahụ ma ọ masịrị m nke ukwuu, kedu ihe ọghọm ị na-ahụ na ihuenyo a?
Acer Aspire V17: ọ bụụrụ m eziokwu na ọbụlagodi na ị gosipụtara na ọ nwere ihuenyo kachasị mma, ọ bụ matte, anụla m n'ezie na a na-ahụ agba nke ọma na ihuenyo kenkowaputa.
N'aka nke ọzọ, a gwala m nke ọma gbasara ọrụ Acer na-ere ahịa mgbe ọ gasịrị, gịnị maka Lenovo?
Site n'ụzọ: Achọrọ m ya tumadi maka ndezi foto.
Ọktoba 2017-06 na elekere 23:4 nke abalị
Kedu maka Álvaro, ọ bụrụ na ị nọ n'etiti laptọọpụ abụọ a. Banyere Lenovo na-agwa gị na ihe nwere ike imezi ihuenyo bụ na ọ bụ naanị na 1080p na-enweghị nhọrọ UHD, ebe ọ bụ na ọ bụ naanị ụdị Y50 na-ebu. Ma ọ bụrụ na ị hụla ya nke ọma, ọ gaghị afụ ụfụ, ebe ọ bụ na e jiri ya tụnyere Y50 agba na-ele anya nke ọma na nke doro anya, ọ na-abụkarị ọganihu, enwere m ike itinye ntụpọ ole na ole ma ọ bụrụ na ị hụla ya nke ọma 🙂
Mgbe-ahịa ọrụ bụ ihe m na-apụghị ikwu nke ọma banyere, n'ihi na m onwe m enwebeghị ọjọọ ahụmahụ na nke abụọ n'ime abụọ, n'ezie adịghị mma, kama "ihe a na-atụ anya". Agbanyeghị, enwere ndị enyi ma ọ bụ ndị nwere ahụmịhe ọjọọ mgbe niile. Ma mgbe ụfọdụ, ọ bụ nanị n'ihi na ndị na-azụ ahịa na-achọ ihe karịrị o kwesịrị ... ihe m ahụla n'ọnọdụ ole na ole. Ụdị abụọ a bụ ndị a ma ama ma ọ bụrụhaala na ị nwere laptọọpụ gị n'okpuru akwụkwọ ikike ị gaghị enwe nsogbu ma ọ bụrụ na nsogbu ị nwere na-abịa n'ezie n'okpuru akwụkwọ ikike.
Ọktoba 2017-06 na elekere 08:10 nke ụtụtụ
Nnọọ. Achọtala m nyocha a ị na-eme na ihuenyo 17 ″ laptop wee hụ na ọ masịrị m nke ukwuu ebe ọ bụ na m na-elele laptops ndị a nwa oge ma achọrọ m ịzụta otu, ị nwere ike nye m ndụmọdụ na Toshiba ika kemgbe m nwere. ọtụtụ n'ime ika a na m Ha anọwo ogologo oge, gịnị ka ị chere maka Toshiba Satellite L70-C-142 na ọnụ ahịa nke € 925. Achọpụtara m na mkpebi nke Lenovo dị mma karịa nke Toshiba, gbasara ọnụahịa ahụ, m ga-achọ ka ị gwa m nhọrọ ndị ọzọ. Daalụ
Daalụ maka ezigbo okwu na ịdenye aha Antonio! Ọ bụrụ na ika dị ka Toshiba na-arụ ọrụ maka gị wee mezuo atụmanya gị, echere m na ọ dịghị mkpa ịgbanwe, na laptọọpụ 17-inch adịghị ọnụ ala iji nwalee ihe ọ gwụla ma ọ bụ maka ahụmahụ ọjọọ 🙂 Tupu ịzụrụ laptọọpụ 17-inch nke ahụ. ị na-ekwu, a ga m akwado ka ị lee anya onyinye a si ebe a nke Toshiba Satellite L70-C-14M wedara na ihe na-erughị € 900 yana 12GB nke RAM yana ihe ndị na-adọrọ mmasị. Ị ga-agwa m ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla akọwapụtara. Daalụ maka ịkwụsị.
Ọktoba 2017-06 na elekere 09:2 nke abalị
Onyinye ị na-agwa m yiri nhọrọ ka mma ebe ọ bụ na i5 enwere m ezuru, mana m ga-achọ ka ị dokwuo anya okwu batrị, sel 4 dị ka Toshiba ma ọ bụ sel 6, n'ihe gbasara laptọọpụ 17 ″, ọ bụ ezie na m M ga-eji ya dị ka PC desktọọpụ. M dokwuo anya na ndị ọzọ m nwere kemgbe 15 ″ yabụ na agaghị m eche ịgbanwe, na-asọpụrụ ọnụahịa ikpeazụ ahụ, na ụdị ndị ọzọ dị ka Lenovo wdg. Daalụ